LG weputara teaser na CES na-egosi LG Rollable | Gam akporosis
LG Rollable adịlarị adị ma ụlọ ọrụ gosipụtara ya na nke mbụ ya
Ọ bụrụ na LG ama juru na iju LG Wing, ugbu a ugbua kpara ya mgbe ị na-egosi LG Rollable dị ka smartphone nke a na-agbanye na ịnụ ọkụ n'obi nke ndị nọ ugbu a bụ ndị nwere ụdị anwansi dị otú ahụ.
Ma ọ bụ na ụlọ ọrụ Korea ga-amalite a mpịakọta-elu ama na nso nso, ọ gaghịkwa agafe ọnwa Machị ma ọ bụrụ na ihe niile agazie etu ha kwesiri; nke ahụrịrịrịrị nke anyị rapara n'oge na-adịbeghị anya (filomena + COVID), ọ dị mkpa ịkpachara anya tupu amụma ọ bụla.
Taa LG egosiputala njiri nke LG Rollable maka oge izizi ka emechara ngosi CES nke emere na Las Vegas. Ọ bụ na pịa ogbako ebe egosi a teaser nke ị pụrụ ịhụ n'ụzọ zuru okè otú mbadamba na-ekemende dị ka a ga - asị na ọ bụ onye kpuru ìsì ịkwụsị usoro ama.
Na mbụ, e gosipụtara LG Rollable na usoro mbadamba ya ka ọ bụrụ na agbakọta anyị chọta ihe ga-abụ smartphone. Ị nwere ike lee teaser ebe egosiri Rollable, ọ bụ ezie na ọ naghị akụzi otu esi etinye onwe ya ma ọ bụ "tụgharịa."
E gosipụtara LG Rollable maka oge mbụ! ?https://t.co/9efT3nK49Bpic.twitter.com/BzlyOFQAHq
- EkwentịArena (@PhoneArena) January 11, 2021
La ihuenyo slides na si n'akụkụ aka nri iji nye ohere ịnweta usoro ahụ kachasị mma maka anyị ma ọ bụrụ na anyị nọ n'okporo ámá dị ka a ga - asị na ọ bụ ama, ma ọ bụ mgbe anyị nọ na sofa ma anyị chọrọ usoro mbadamba ka mma iji kpọọ vidiyo na ihe ndị ọzọ.
Ihe kachasị adọrọ mmasị banyere ahụmịhe a bụ na enyo ahụ apụtaghị ekewa n'oge na-adịghị anya ọ na-ezere ngwaọrụ ndị ahụ n'obosara dị ka Galaxy Z Fold 2.
Ugbu a anyị amaghị ọnụahịa LG Rollable, ma anyị nwere ike ịchọ ịhụ otú o si arụ ọrụ, ebe ọ bụ na ọ dị ka anụ ọhịa ma ọ bụrụ na ị na-ezere nkụda mmụọ ndị ahụ nke mobiles ndị ọzọ yiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG Rollable adịlarị adị ma ụlọ ọrụ gosipụtara ya na nke mbụ ya
Nịm 'visual Mkpu' ka ngwa ọdịnala ị na-eji ihe ndị kasị iji mee ka ị mata nke kpụ ọkụ n'ọnụ were na Mind Leak
Onye isi oche nke Telegram na-eme ka o doo anya: ọ bụrụ na ịchọrọ nzuzo na nnwere onwe, pụọ na Apple ma zọọ na gam akporo